Al shabaab-zakariye Ismaaciil Xirsi oo Shir Jaraa’id ku Shaaciyay Inuu Nabadda Qaatay |
Al shabaab-zakariye Ismaaciil Xirsi oo Shir Jaraa’id ku Shaaciyay Inuu Nabadda Qaatay
Shir Jaraa’id oo uu qabtay Zakriya Ismaaciil ayaa ku sheegay inuu ahaa xubin ka tirsan Al-shabaab oo aan xilal kala duwan u soo qabtay. Waxaanan rabaa inaan ka hadlo arrimo kala duwan oo muddo soo jiitamayay oo uu ALLE maanta I waafajiyay.
Xaaladduna Waxay ku Dambeysay:
In laga been-sheego ku dhaqankii shareecada laguna dhacay xad-gudub diineed.
2. Midnamadii iyo wada-tashigii ururkana oo meesha ka baxay.
clomid buy online, buy clomid. 3. Xariirkii bulshada oo xumaaday, kaddib markii loona turi waayay.
4. Dulmi iyo xad-gudub badan oo loo gaystay xubno ururka ka mid ahaa.
5. In jihaadkii la leexiyay, loona rogay in shacabka lagu beegsado, dhiigna lagu daadiyo.
“Waxaa xaqiiqo ah in fikirkaas qaloocan uu ku koobanaa rag fara-ku-tiris ah oo hoggaanka ururka Al-shabaab ka tirsan, waxaana jira dad badan oo aan fikirka la qabin; isla markaana aan ku qanacsanayn sida ay wax u socdaan,” ayuu shirkiisa jaraa’id ku yiri Zakariye.
Haddaba; waxaan caddeynaayaa maanta wixii ka dambeeya inaan xubin ka ahayn Al-shabaab, fikirkaygana aan ku gudbisan doono qaab nabadeed iyo is-faham… aanan ka tanaasulay inaan dagaal iyo colaad wax ku xaliyo.
Waxaan ugu baaqayaa kuna dhiirri-galinayaa ragga saaxibbadey ah in si wadahadal iyo nabadgalyo ah wax lagau xaliyo maadaama ururka Al-shabaab uu ku yimid burbur iyo kala-tag, anigana halkan waxaan u imid sidii aan arrinkaas uga howlgali lahaa.
Sidoo kale, Zakariye Xirsi oo ahaa madaxii sirdoonka Al-shabaab ayaa wuxuu ku sheegay shirkiisa jaraa’id inuu u mahadcelinayo dowladda Somalia; sida qadarinta iyo xushmada mudan ee ay noo soo dhaweysay. Waxaanan si aad ah ugu faraxsanahay in maanta ay jirto dowlad Soomaaliyeed oo sharci ah, isla markaana daneynaysa xuquuqda bulshada Soomaaliyeed oo dhan.
Ugu dambeyn, sarkaalkan kasoo goostay Al-shabaab ayaa wuxuu xusay in aysan waxba ka jirin aragtida ay dad badan oo ururka ka mid ahi aaminsan yihiin, taasoo ah in dowladda Somalia ku xad-gudubtay xuquuqda shacabka iyo in muwaadiniinta Soomaaliyeed loo gacan-geliyo shisheeyaha.
Si kastaba ha ahaatee, dowladda Soomaaliya ayaa dhankeeda soo dhaweysay go’aanka uu qaatay Zakariye Ismaaciil Xirsi oo ka dhawaajiyay maanta inuu qaatay nabadda, uuna ka tanaasulay fikaradihii Al-shabaab ee uu horay u aaminsanaa.